mercredi, 31 mars 2021 15:02
Consulat général de France : Nanakatona varavarana ho fiarovana amin'ny Covid-19
Noho ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 dia nandray fanapahan-kevitra ny masoivohon'ny Frantsa fa hakatona ny toerana fandraisan'olona eo anivon'ny Consulat général de France ho fiarovana amin'ny valanaretina. Misy rohy fifandraisan-davitra hiseraserana amin'izy ireo ho an'izay mila izany, ka raha misy ny fihaonana manokana dia any no andaminana ny fandraisana olona. Ireo teratany frantsay mila vonjy manokana moa dia efa misy laharana finday natokana ho azy ireo misokatra 24/24ora 7/7andro.
mercredi, 31 mars 2021 15:01
Mahajanga : Nakatona avokoa ny sekoly frantsay
Noho ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 eto Mahajanga dia nakatona avokoa ireo sekoly frantsay rehetra.
Mahajanga : Maro ireo maty sy marary eny amin'ny hopitaly
Miangavy anareo tompon'andraikitra hijery manokana an'i Mahajanga fa feno tanteraka ireo hopitaly, maro ny maty, tsy maharaka ny fitaovana, tsy ampy ary vidian'ny marary lafo ny oxygène sy ny fanafody, ireo mpiasa efa maro koa no tsy sahy miasa intsony, fa maro no efa marary amin'izy ireo, misy ireo tambazana vola mihitsy andeha hiasa, fa tsy sahy intsony. Miangavy anareo tompon'andraikitra naka ireo fitaovana famatsiana oxygène na concentrateur d'oxygène nomen'ny Ambassade de France, amerina izany amin'ny hopitaly, fanomezana nomena ny hopitaly izy ireny fa tsy azonareo alaina fotsiny ohatr'izao. Patrick
mardi, 30 mars 2021 18:46
Antsiranana : Nodimandry i Djaovojozara Désiré, ex-PDS Faritany
Nodimandry omaly i Djaovojozara Désiré. Administrateur civil izy ary efa Filohan'ny delegasiona manokan'ny Faritany Antsiranana (PDS) fony Ratsirahonana Norbert Lala filoham-panjakana. Rain'ny Ben'ny tanàna amperin'asa ao amin'ny Kaominina ambonivohitra Antsiranana, Djaovojozara Jean Luc izy. Nentina nihazo an'Anivorano Nord androany ny nofo mangatsiakany. Rahampitso alarobia 31 martsa 2021 no hatao ny fandevenana azy. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 30 mars 2021 18:45
Firaisamonim-pirenena : Matin’ny Covid-19 i Doudou
Nindaosin’ny fahafatesana androany maraina noho ny aretina Covid-19 teny amin’ny hopitalin’Anosiala ny filohan’ny vovonan’ny firaisamonim-pirenena nasionaly eto Madagasikara, na PFNOSCM, antsoina hoe Mahamoudou Ndriandahy na i Doudou. Fantatra amin’ny fahitsiany sy ny fahatsorany ary ny hafanampony amin’ny ady amin’ny tsy rariny sy ny tsy fahamarinana ity raim-pianakaviana iray mipetraka eny Ambohipo ity. Matetika izy no hita mandray anjara mavitrika amin’ireny adihevitra lehibe mivantana amin’ny fahitalavitra ireny. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany sy ny ankohonany ary mankahery ny firaisamonim-pirenena Malagasy. Balita Raharisoa
lundi, 29 mars 2021 18:42
Xavier Ratsiraka : Nigadona teny Ivato ny takariva teo ny Jet privé nitondra azy
Tamin’ny 5 ora sy sasany hariva teo, no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina manokana Jet privé an’ny kaompania TOA nitondra avy any Adis Abeba an’i Xavier Ratsiraka, zanaka lahitokan’ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka, izay nodimandry ny marainan’ny alahady 28 martsa 2021. Xavier Ratsiraka no hany mpandeha tao anatin’ilay fiaramanidina ankoatra ny mpanamory. Raha nisaotra ny vahoaka Malagasy sy ny fitondram-panjakana ny Depiote Roland Ratsiraka, solontenam-pianankaviana, taorian’ny fametrahana ny nofomangatsiakan’i Amiraly Didier Ratsiraka teny amin’ny Mausolée Avaratr’Ambohitsaina dia nampahafantatra fa “eto ampiandrasana ny zanany lahy Xavier Ratsiraka” izy ireo. Eto an-toerana, niatrika ny fotoana rehetra nahateo am-bohitra ny nofomangatsiakan'i Amiraly Didier Ratsiraka ireo zanany telo vavy, dia Olga Ratsiraka, Sophie Ratsiraka ary Annick Ratsiraka.
lundi, 29 mars 2021 12:16
Covid-19 : 394 no lavo hatramin’ny 23 martsa 2020
Namono olona 7 ny Covid-19 raha ny antontan'isa ny 28 martsa 2021. Tafakatra 394 no lavon’ity valanaretina ity hatramin’ny 23 martsa 2020. Isan'ny natao fitiliana : 1281 2 Analamanga1 Atsinanana1 Matsiatra Ambony2 Boeny1 Atsimo Andrefana
lundi, 29 mars 2021 11:04
Manam-boninahitra ambony no milanja ny Razana
Amin'ny fomba miaramila dia Manam-boninahitra ambony no milanja ny Razana Amiraly 5 étoiles, faran'ny ambony indrindra eo amin'ny Foloalindahy. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 29 mars 2021 10:42
Homi (Jereo Sary Tohiny)
Antsohihy : Mitombo isan'andro ny olona voan'ny Covid-19
Mbola sarotra ny andresena ny valanaretina Covid-19 eto Antsohihy raha tsy andraisana fepetra manokana ny ao an-tsena (Bazary Be) Haute-Ville, izay ifamezivezen'olona betsaka indrindra, nefa zara raha misy elanelana voahaja na amin'ny mpivarotra na ny mpanjifa. Mivarahontsana noho ny tahotra ireo mipetraka manodidina ny tsena noho ny fitangoronana misy eo am-baravarana. Efa nisy ny fepetra noraisin'ny komity miady amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 ao amin'ny faritra Sofia, koa andrasan'ny maro ny fampiharana izany amin'ny tsena eto Antsohihy mba hitandroana ny firongatry ny valanaretina covid-19. (Jereo Sary Tohiny)